SPORTS | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 4
DAAWO: Maamulka Real Madrid Shir aan Caadi ahayn isugu imaanaya si ay Go aan uga Gaaraan Rafa Benitez
Sida ay daabaceen inta badan Wargeysyada kasoo Baxa dalka Spain Waxaa shir deg deg ah waxaana lasheegayaa in ay Go aan kagaari doonaan Mustaqbalka Macalinka Naadigaas Rafa Benitez kaas oo sixun looga badiyey Kulankii El Clasico. Taageerayaasha Real Madrid ayaa laxaqiijiyey in ay Ku oriyeen Cayaartoyda iyo Macalinka Naadiga Real Madrid iyaga oo dalbaday in lakeeno Macalin Cusub. Barcelona ayaa 4-0 ...
DAAWO: Ceebta ku dhacday Xulka Soomaaliya Soomaaliya
Xulka qaranka Tanzania ayaa dhegaha ka Garacaaya Cayaaryahanadii ku dheelayey Magaca Soomaaliya Kulan katirsanaa koobka Bariga iyo Bartamaha Africa waxaana looga badiyey 4-0. Goolka hore ee ayaa Kuyimid Rigoore uu dhaliyey Cayaaryahanka John Bocco sidoo kalana Goolka labaad ayaa yimid daqiiqadii 17 aad waxaana dhaliyey Elias Maguli qaybta hore ayaa kusoo dhamaatay 2-0 ay ku Hogaaminayeen Xulka qaranka Tanzania. Qaybta Labaad ayaa sidii ...
Dayax Dalnuurshe iyo Saaxiibkiis Nimacaan Hilaac Maxaa kala qabsaday Maxayse Horay ugu Balameen
Waxaa Caalamaka oo dhan si isku mid ah inta badan looga Daawaday Loogana hadal hayey Kulanka loo yaqaan El Clasico kaas oo dalekeenana laga daawaday ayna Joogaan Taageerayaal badan oo labadaas Naadi kala taageera. Hadaba dadka sida weyn u kala Taageera Real Madrid iyo Barcelona Todobaadkaana sida weyn isku biro Tumanayey Waxaa kamid ah 2 da Fanaan ee da da ...
Luis Enrique” Sergi Roberto Waa Xidig aan daah lagu aadin karayn
Macalinka Kooxda Kubada Cagta Barcelona ee Luis Enrique ayaa shaaca kaqaday in Cayaaryahankiisa da da yar ee lagu magacaabo Sergi Roberto uu yahay Cayaaryaahan aad u wanagsan ahna mid aan laqarin karayn shaqada Wanaagsan ee uu Garoonka kaqabto. Luis Enrique oo hadalayey Maanta kadib guushii uu ka gaaray Kuankii El Clasico ayaa Wilkaan yar ku amaanay hawshii uu qabtay Kulankaas isaga oo sameeyey ...
Memphis Depay Wuxuu ahaa Gool aad Muhiim iigu ah
Cayaaryahanka kooxda Kubada Cagta Manchester United ee lagu magacaabo Memphis Depay ayaa ku tilmaamay Goolkii uu u dhaliyey Naadigiisa in uu mid aad Muhiim ugu ah isaga iyo Kooxdiisa isla markaana uu niyada u dhisayo. Memphis Depay oo Warasyi qaas ah siiyey MUTV:ayaa yiri Runtii aad ayaan ugu Faraxsanahay in aan dhaliyo Goolkaas iyada oo ay waliba maqanyihiin ayuu yiri Cayaartoy Muhiim ...
Daawo Sawirada Weeraryahan Jibriil Xasan Firiid dhaawacii Maanta soo gaaray intee la egyahay?
Waxaa dhaawac soo Gaaray Cayaaryahanka Weerarka uga dheela Naadiga Heegan iyo Xulka Soomaaliya Jibriil Xasan Firiid kaas oo dheelayey Kulankii Galabta looga badiyey Soomaaliya 4-0 ta ee ay ladheeleen Xulka Tanzania. Jibriil Xasan Firiid oo aan lahadlay ayaa ii sheegay in dhaawac Culus kasoo gaaray Jilibka isla markaana uu dareemayo Xanuun Saa id ah Waxaana kaloo uu ii sheegey in ...
Ciyaryahanada Real Madrid oo Dhaleeceeyay Macalikooda Rafa Benitez
Daafaca Kabtanka u ah kooxda Kubada Cagta Real Madrid Sergio Ramos ayaa shaac kaqaaday in Cayaaryahanada Naadiga Madrid ay Farta ku fiiqayaan qaab Cayaareedka Macalin Rafa Benitez kaas oo uu sheegay i uusan Kooxda si wanaagsan u safin. Sergio Ramos ayaa intaas kudaray in Cayaaryahanada Naadiga Real Madrid ay mideyeysanyihiin isla markaana aysan wax weyn u arkayn Guuldaradii El Clasico laakiin ...
Zlatan Ibrahimovic oo Shaaciyey Naadiga uu kajecelyahay Premier League,
Weeraryahanka kooxda Kooxda Kubada Cagta PSG ee lagu magacaabo Zlatan Ibrahimovic ayaa shaac kaqaaday in uu aad u jecelyahay Naadiga Arsenal ee uu hogaamiyo Macalin Arsene Wenger hadiiba uu kadheeli lahaana Horyaalka Premier League uu iyada u dheeli lahaa. Zlatan Ibrahimovic oo kamid ah Cayaaryahanada Caalmka ugu magaca Weyn Xiligaan ayaa kahadalay mustabalkiisa Naadiga PSG waxaana uu sheegay in hadii uu katago ...